Ghibli fan တွေအတွက် သတင်းကောင်း လာပြီ - Myanmarload
Ghibli fan တွေအတွက် သတင်းကောင်း လာပြီ
စာဖတ်သူထဲမှာ OTAKU လေးတွေ ရှိလား။ အာနီမဲတွေ ပုံမှန်ကြည့်နေကျသူဆိုရင် နာမည်ကြီး Studio Ghibli ရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hayao Miyazaki ကို မသိသူ မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအားလုံးက ရှုထောင့်သစ်တွေ ပါဝင်ပြီး စိတ်ထဲ တစ်ခုခု လှုပ်ခတ်အောင် အမြဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Ghibli films ©animeXpress
ရုပ်ရှင်အသစ်ထွက်တာ မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Miyazaki က မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ပေးခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက The New York Times နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် "How Do You Live?" အမည်ရ ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးဖို့ စီစဥ်ထားကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၈၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးက ဒီတစ်ခါ တကယ်နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်း ဖြစ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
A still from "The Wind Rises" Hayao Miyazaki ©2013 Studio Ghibli
သူ့ပြောပြချက်အရ ဇာတ်လမ်းက တကယ့်အမိုက်စား စိတ်ကူးယဥ် (Fantasy) အမျိုးအစားပါတဲ့။ မူရင်းဝတ္ထုကို ၁၉၇၃ မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လည်း ရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ တိုကျိုမြို့က အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ပိန်ပိန်ညှက်ညှက် ခပ်ပေပေ ဖတဆိုး ကောင်လေးရဲ့ အကြောင်းပါ။ လောလောဆယ်တော့ ရုပ်ရှင်အတွက် စီစဥ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Hayao Miyazaki ©Google
နယူးယော့တိုင်းမ်စ်ရဲ့ သတင်းထောက်က အင်တာဗျူးအဆုံးမှာ Miyazaki ကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုက်ပါတယ်။
"ဇာတ်လမ်းနာမည်က How do you live? ဆိုတော့ ပရိသတ်ကို ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတဲ့ အဖြေပေးမှာလား။"
မေးခွန်းကြားတဲ့အခါ Miyazaki က ပြုံးပြီး "ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအဖြေကို မသိလို့ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်တာပါ" လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
Ghibli ရဲ့ ရုပ်ရှင်အသစ်လေးကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ချင်းပြည်နယ်သတင်း ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်
ရွှေဘုံစံ မင်းသမီးလေး မာဂါ ထူးချွန်ဆု ရရှိ
ပြည်သူချစ်မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ မွန်မြတ်ဒါနတစ်ခု
Billboard မှာ နံပါတ် ၁ ချိတ်တဲ့ All too well (Taylor's version)